Uguqulo lwemali lweekhompyuter kunye nezixhobo eziphathwayo | Iindaba zeGajethi
Uguquko lwemali oluninzi lunokuba luncedo kuye nakubani na nangomzuzwana othile, ukuba singabanye baba bantu abatyelela iivenkile ezahlukeneyo ezikwi-Intanethi ukuze bafumane uhlobo oluthile lwemveliso. Ngenxa yokuba imihla yeKrisimesi isondele kakhulu, le meko inyanzeliswa ngakumbi kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi, kuba ukutyelela ezi ntlobo zemeko kuya kusinyanzela ukuba sijongane neemali ezahlukeneyo, esingazaziyo xa zizonke.
Kungenxa yokuba i-euro, idola, iphawundi kunye nezinye iimali ezimbalwa zihlala zitshintsha mihla le (kwaye ngamanye amaxesha umzuzwana ngamnye), akunakwenzeka ukuba wazi inqanaba lotshintshiselwano phakathi komnye nomnye, yiyo loo nto uhlobo oluthile lokuguqula iingqekembe ezininzi; kweli nqaku siza kuthetha iindlela ezizezinye zokudityaniswa, apho ezinye ezinikezelwe kwizixhobo eziselfowuni ze-Android kunye nezinye iikhompyuter ezizezakho ziya kuqwalaselwa ngokukodwa.
1 Ukuguqula imali okuninzi kwiikhompyuter zakho
2 Uguquko lwemali oluninzi lwe-Android
Ukuguqula imali okuninzi kwiikhompyuter zakho
Yindlela yokuyithetha, kuba ngokwenyani siyakucebisa kweli candelo lokuqala kwinqaku malunga nesiguquli iingqekembe ezininziKukusicelo sewebhu nakwisixhobo; Kwimeko yokuqala, usetyenziso lwewebhu lunokusetyenziswa kulo naluphi na uhlobo lwekhompyuter yakho, Ufuna kuphela isikhangeli esikwi-Intanethi, enye ne Unokuba nguGoogle, iMozilla Firefox, i-Intanethi Explorer, iOpera okanye nayiphi na enye into oyithandayo. Inkqubo emayilandelwe yile ilandelayo:
Sifaka isicelo sewebhu «Isiguquli semali», ikhonkco oya kulifumana ekupheleni kwenqaku.
Siza kufumana ujongano olunobuhlobo ekulula ukuluqonda ngumsebenzisi.
Kukhetho «Ukusuka»Kufuneka siqwalasele uhlobo lwemali enexabiso esilaziyo.
Kukhetho «Ukuya»Endaweni yoko kufuneka sibeke uhlobo lwemali esifuna ukuyiguqula.
Kwi "Isixa»Endaweni yoko kuya kufuneka sibeke ixabiso lentengiselwano esinqwenela ukuphanda ngalo.
Kule ndlela inye yesicelo sewebhu sinokubona ezinye «Iintolo ezimbini»I-Verticals, eya kuthi isincede ekuguqulweni« umthombo-wokuya »uhlobo lwemali uhlobo.
Ukuba sisicelo sewebhu, isindululo esele sichazile sinokuphunyezwa kulo naluphi na uhlobo lweqonga, nokuba yiWindows, iMac okanye iLinux. Enye into elandelayo esiza kuyikhankanya iyodwa kwiWindows 7, inkqubo yokusebenza kweMicrosoft eza kudibanisa iiGajethi ezaziwayo kwaye ngoku, ezi zinto azikho kwiWindows 8. Ukuze ukwazi ukusebenzisa le nto, kuphela:
Kufuneka ucofe iqhosha lasekunene le mouse yethu kwidesktop.
Ukusuka kukhetho lweemeko ezibonisiweyo, sikhetha leyo ithi iGadget.
Iwindow entsha iya kuvela neeGajethi ezimbalwa, apho siza kukhetha leyo ithi "Imali".
Le gadget iya kubekwa ngokufanelekileyo kwicala lasekunene kwidesktop yethu yeWindows, kwaye kufuneka umsebenzisi enze ngokwezifiso uhlobo lwemithombo kunye nemali yendawo yokuya kuyo; amaxabiso aboniswe apho aya kuhlaziywa ngexesha lokwenyani, oku kube luncedo olukhulu kwaye kube lula kwabo bahlala kweli lizwe lemali.
Uguquko lwemali oluninzi lwe-Android
Nokuba unayo ifowuni ye-Android okanye ithebhulethi, kwivenkile yokudlala kaGoogle ungayifumana le nto isiguquli iingqekembe ezininziKukho iindlela ezi-2 ezilungileyo zokubamba iindwendwe.
Ujongano lwesi sicelo ngasinye sinomtsalane, apho kukho ezinye iindlela zokubeka imali yemvelaphi kunye nemali yendawo ekuyiwa kuyo.
Umfanekiso esiwubeke apha ngasentla ubhekisa kwenye yezi zicelo ze-Android, ekunokwenzeka ukuba yeyona igqibelele ngenxa yokubonelelwa kwitreyi encinci eyongezelelweyo, apho kukho amanani onokuthi uthayiphe ngokulula kuwo beka ixabiso ofuna ukulifumana kwimali eyahlukileyo. Ngayiphi na imeko, nokuba sisiphi na isicelo se-Android ogqiba ukusifaka kwifowuni yakho, kunokuthiwa ezi ndlela zimbini zinokwanelisa nayiphi na imfuneko yokwazi (ukwaziswa) ngokwenzeka emhlabeni nakwezinye zezi mali.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Sebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zezicelo kwiGoogle Chrome
Iiwebhusayithi Ukusetyenziswa kwewebhu, Isibali-mali, Uguqulo lwemali
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Fumana isiguquli semali esihlukeneyo yezixhobo ezahlukeneyo